XOG: Dowlada Somalia oo Fariin Hanjabaad ah u dirtay Qatar iyo Roobow oo xumeynaya xiriirka labada dal | Allbanaadir Media
XOG: Dowlada Somalia oo Fariin Hanjabaad ah u dirtay Qatar iyo Roobow oo xumeynaya xiriirka labada dal
Sarkaal ka tirsan Madaxtooyada Soomaaliya ayaa sheegay in Madaxtooyada Soomaaliya ay digniintii ugu dambeysay u jeedisay Dowlada Qatar oo xiriir wanaagsan uu kala dhaxeeyo balse ku adkeysaneysa inay Doorashada ka taageerto Mukhtaar Roobow oo Dowlada Dhexe ay kasoo horjeedo inuu tartamo.
Badweyn Hanjabaad iyo Fariin kulul ah ayaa loo diray Dowlada Qatar oo lagu wargeliyay hadii ay ka bixi weyso Falkan inay dacwad ay Somalia ka gudbin doonto Qatar iyadoo xiriirka labada Dal uu xumaan doono.
Taleefishinka Caalamiga ah ee Al-Arabiya ayaa cadeeyay sida Xukuumadda Doha kaga go’an tahay inay taageerto Abu Mansuur, oo ah musharax u taagan xilka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya.
Qatar ayaa la sheegay in markii hore ay qeyb ka ahayd in Roobow kasoo baxo Al-Shabaab, islamarkaana noqdo siyaasi caadi ah, waxayna kasoo horjeedaa inay kaga baxdo balantii ay la gashay oo aheyd inay maalgalineyso.
Dowlada Dhexe ayaa wada dadaaladii ugu dambeeyay oo cadaadis ay ku saareyso Mukhtaar Roobow oo Xildhibaano aruursi ka wada Magaalada Baydhabo, waxayna dooneysaa inay tanaasulo ka hor Doorashada.